केही आफ्नै कथा, ब्यथा अनि भावनाहरु: मानस पटलमा उब्जिएका अनुभुतिका सृजनाहरु
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 2:21 PM
निकै सजीव भावमा पोखियो मन मनुजी को । निरन्तरताको कामना !
बडा दसैं २०६७ को मनु जी लगायत ब्लगका सम्पूर्ण पाठक हरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
निकै शसक्त भावहरु छताछुल्ल हुने गरि पोख्नु भएको रहेछ ! निकै राम्रो रहेको छ !
तर एउटा कुरा , यसलाई कविता भन्दा पनि मोनोवाद जस्तो कुनै लेख नै लेख्नु भएको भए जाति हुने थियो कि ?
र विजय दशमीको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभ कामना छ - मनु जी !
सुर्य जि र वेद जी दुवै जनामा समग्र रुपमा ढिलै भए पनि बिजया दशमी २०६७ को हार्दिक मँगलमय शुभकामना । अ........ खै वेद जी हुन त रमाइलै हुन्थ्यो होला है तर कस्तो अल्छि भा छु के म अचेल त्यै भएर यसो झारो टार्ने काम मात्र गरे अव यसैलाई त्यो रुपमा ढाल्न पर्ला एक दिन धन्यवाद है सुझाव को लागी ।